WINE 6.11 inouya nerutsigiro rwematimu muzvirongwa zvakavakirwa-mukati | Linux Vakapindwa muropa
Senge mavhiki maviri ega ega, mushure yazvino vhezheni yeavo vanoda yakanyanya-up-to-date software y mudanga, WineHQ yakaburitsa zvekare Staging vhezheni yesoftware yayo yekumhanyisa Windows mafomu pane mamwe masisitimu anoshanda. Kunyanya chaizvo, maawa mashoma apfuura ivo vaparura WAINI 6.11, itsva Stage vhezheni iyo yasvika pasina shanduko sezvakakurumbira senge yekuvandudza mazuva gumi neshanu apfuura ayo akaunza chinyowani chitsva cheMono injini.
Kana isu tikatarisa pane runyorwa rwezvinhu zvitsva zvakasimbiswa neWineHQ, WINE 6.11 haisi iyo inonakidza yekuvandudza iyo inoyeukwa. Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti inotsigira madingindira ezvirongwa, asi zvimwe zvese shanduko dzisina kupisa kana kutonhora. Hongu inofanira kunge ichidziya zvishoma kana tichitarisa zvishoma pasi, uko chirongwa ichi chinotaura makumi matatu neshanu uye shanduko makumi matatu nenomwe. Ivo havasati vari mazana mana andakamboona, asi ivo vanoramba vachivandudza kuitira kuti chinhu chega chatinofanira kufunga nezve Windows ndechekuti tinoshandisa WINE.
WINE 6.11 inosimbisa
Tsigiro yetimu muzvirongwa zvese zvakavakirwa-mukati.
Zvese zvakasara CRT math mabasa anotumirwa kubva kuMusl.
MP3 rutsigiro inoda libmpg123 zvakare pane macOS.
Tsigiro yekodhi 720 (ChiArabic).
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.11, iyo yatisingafanire kukanganwa kuti iri Staging vhezheni, kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iro repamutemo reprojekiti yekugamuchira iyi uye nezvimwe zvenguva pfupi zvigadziriso pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune mamwe mavhezheni e Android uye macOS. Iyo purojekiti inotibvumidza isu kusarudza bazi pakati peyakagadzikana, kusimudzira kana Dev uye Staging.
Iyo inotevera Stage vhezheni ichave WINE 6.12, uye ichave ichinyatso svika svondo rinotevera, Chikunguru 2. Hatigone kuziva kuti ndeapi mashoko aachaunza pasi poruoko rwake, asi isu tinoziva izvozvo ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.11 inosvika nerutsigiro rwematimu muzvirongwa zvakavakirwa-mukati uye angangoita mazana matatu ekuchinja